Bogga Ciyaaraha, 21 January 2019
Isniin 21 January 2019
Natiijooyinka Horyaalka Talyaaniga
Saddex isbuuc oo fasax ah kaddib waxaa todobaadkaan dib u soo laabtay horyaalka Seria A. Kooxda kaalinta labaad ku jirto ee Napoli waxay lix dhibcood oo qura u soo jirsatay hogaamiyaasha horyaalka ee Juventus, ka gadaal marki ay xalay 2-1 ku martay Lazio.
Faah-faahinta Horyaalka Ingiriiska ee Todobaadka
Horyaalka Premier League Ingiriiska, todobaadkaan waxaa wada badiyay dhamaan kooxaha waaweyn marka laga reebo Chelsea oo jab kala soo laabatay garoonka Emirates ee kooxda Arsenal Sabtidii kadib marki looga badiyay 2-0.
Barcelona oo mar kale badisay
Kooxda Barcelona ayaa kordhisay dhibacaha ay ku horkaceyo horyaalka La Liga, kaddib marki ay xalay 3-1 ku garaacday naadiga Leganes.
Arsenal oo Garaacday Chelsea
Kooxda Arsenal ayaa soo nooleysay rajadi ay ka laheyd in ay sannadkaan ka mid noqoto afarta koox ee ugu sarreysa horyaalka Ingiriiska, kaddib marki ay xalay 2-0 uga badisay Chelsea.
Juventus oo qaadday koobka Italian Super Cup
Kooxda Juventus ayaa ku guuleystay koobka Super Cup-ka dalka Talyaaniga kaddib marki ay xalay fiidkii 1-0 uga badisay AC Milan.
Atletico Madrid oo ka hartay Copa del Rey
Kooxda Atletico Madrid ayaa xalay si lama filaan ah uga hartay tartanka Copa del Rey kadib marki ay ka badisay kooxda Girona.
Henry iyo Viera oo xalay iska horyimid
Kooxaha Monaco iyo Nice ayaa ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Leage One-ka France oo ay xalay dheeleen ku kala baxay bareejo 1-1 ah.
Valencia oo gaadhay wareega sideeda
Kooxda kubadda cagta Valencia ayaa u gudubtay wareega sideeda kooxood ee tartanka labaad ee dalka Spain ee loo yaqaano Copa del Rey kaddib marki ay 3-0 ku garaacday kooxda daala dhaceysa ee Sporting Gijon.
Messi oo dhaliyay goolkiisii 400-aad
kooxda Barcelona waxay 3-0 uga badisay naadiga Eibar.
Man Utd oo garaacday Tottenham
Kulanno xiiso leh oo ka tirsan hoyaalka Ingiriiska ayaa xalay fiidkii dhacay.
Gattuso: Higuain wuxuu rabaa inuu baxo
Tababaraha kooxda AC Milan Gennaro Gattuso ayaa sheegay in laacibka kooxdiisa Gonzalo Higuain uu rabo inuu isaga tago naadiga, xilli ay sii xoogeysanayaan in gool dhaliyahan uu ku wajahanyahay kooxda Chelsea.
Fabregas oo ku biiray Monaco
Kooxda Monaco ayaa Jimcihi ku dhawaaqday saxiixa laacibka reer Spain ee Cesc Fabregas kaasoo oo hadda kasoo wareegay kooxda Chelsea.